Google Earth oo loo isticmaalo Cadastre? - Geofumadas
Luulyo, 2007 ArcGIS-ESRI, cadastre, Google Earth / Maps
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah faallooyinka qaar ka mid ah blogyada, waxay u muuqataa in Google Earth ay gaari doonto meel ka baxsan ujeedooyinka degaanka ee shabakadda; waa sida kiisaska codsiyada loogu talagalay aagga cadawga. El Diario Hoy, oo ka socota magaalada Mar de Plata ayaa soo saartay kiis, kaas oo loo qaadayo heerka sharci-dejinta ee ujeedooyinka georferencing iyo qiimeynta.
Sida caadiga ah sharciyada degmooyinka ama degmooyinka, la dhiso ururinta canshuurta hantida sida mid amar ah canshuurta u ogolaanaya iyaga si aad u hesho khayraadka in dib loo gelin karaa in mashaariicda loo hagaajiyo tayada nolosha ee dadka deggan. Waayo, kan loo yaqaan "qiimaha la qiimeeyey" waxaa loo isticmaalaa, oo in kastoo ay jiraan habab kala duwan oo ka mid ah codsiga, ujeedadu tahay in cidda guriga in uu bixiyo lacag saamiyeed si ay "qiimaha" wanaagga kharashka ku lug leh degmada si ay u bixiyaan adeegyada dadweynaha iyo sida gacan ka geysata madax-bannaanida dhinaca is-noolaanshaha.
Hantida aan la qoondeeynin waxay u muuqataa inay yihiin kuwa keena dhibta ugu weyn ee wakhtiga fulinta waajibaadka canshuurta waxayna ku jirtaa aaggan Google Earth oo loogu talagalay in lagu ogaado hagaajinta magaalada iyo dalagyada joogtada ah. Waxaa muuqata in qalabka Mara Plata uu kaliya bartilmaameedsanayo qiyaasta canshuurta, maaha ogeysiiska qiimeynta ama qeexidda joometeriga ee guryaha tan iyo markii la og yahay in muuqaalada Google Earth ay leeyihiin heer isbedel ah raali gelin sababtoo ah qaabka dhulalka loo isticmaalo habka korontada ayaa lagu xaddiday tirada dhibcaha; Sidan oo kale, degaannada dalalka horumaray waxay leeyihiin faa'iido leh tirada dhibcooyinka geootiga iyo isticmaalka ku dhawaad ​​"dadweynaha".
Sharciga la soo jeediyay wuxuu ka kooban yahay mid ka mid ah qaybahiisa sadarka soo socda:
"Marka sababo aan la xiriirin jihada cadastre waxaa jira shay dhuleed (guryo ama guryaha) weli qeyb ka mid ah dhul cadastral aan wakiil qorshe la ansixiyey iyo diiwaan sharciga hadda jira, sida jidhka individualize laga yaabaa, diiwaan gelin iyo ku meelayn alaabta guryaha iyada oo loo marayo habab kale oo xadaynta dhulka in la damaanad qaado heerarka sax, isku halaynta iyo daacadnimada u dhigma falimihiisii ​​mensura "
Hindisaha ayaa noqonayaa xiiso leh (khatar farsamo) tan iyo markii ay soo saari karaan tikidhada iyo rasiidhada, kaas oo jira ilaa nidaamka maamul iyo farsamo ee lagu dabaqi karo guud ahaan waa cadayn, habka farsamo Waxa laga yaabaa in cabbirka canshuurta hantida, qiimaysay waxaa la sameeyaa ee isticmaalka dhulka iyo aqoonsiga of xisaabinta canshuurta sida ay horumar iyo dalagyo joogto ah.
Mar kasta oo teknoolajiyada macluumaadka loo noqdo kuwo intan la heli karo iyo fududahay in ay la tacaalaan, dabcan halista waa heer sare ah, sida markii oo dhan kids bartay in ay isticmaalaan ArcView go'aansaday iyagu uma ay baahnayn inay bartaan fikradaha wadci. Hadda qof walba ogyahay sida loo isticmaalo Google Earth wuxuu sheegi doonaa inuusan u baahnayn inuu ogaado geodesy?
Ugu dambeyntii, isticmaalka macluumaadka sida kuwa ay bixiyaan Google Earth waa xal aad u fiican oo wadamada aan lahayn muuqaal muuqaal ah ama duumo dhowaan ah; marar badan sababtoo ah hey'addaha dawladu way daciif u yihiin bixinta adeegyadaan degmooyinka. Sidaas darteed haddii ay tahay in la aqoonsado barkadaha, dhismayaasha cusub, magaalooyinka ama meelaha beeraha joogtada ah, hubaal Google Earth waxay noqon karaan xulaf wayn. Sidoo kale looma sheegi karo haddii aad doonayso inaad isticmaasho macluumaadka ujeedooyin sharci ah ama iskudarcelinta xogta iyadoo la samaynayo sahammo dheeri ah iyadoon wax kala duwaneyn oo u sheegaya shaqaalaha cusub inay bedelaan xukuumadda.
Post Previous«Previous Heerarka Maareynta Kastamka Dawladda
Post Next Maxay qaar ka mid ah blogs-ka Cartesian la joojiyeyNext »
6 Jawaab "Google Earth ee Isticmaalka Daroogada?"
Waddankee ayaad tahay?
Ujeedadu waa inaad raadsato xirfadle, sababtoo ah waddan kasta wuxuu leeyahay shuruudo kala duwan oo ku saabsan habsami u socodka dhulka.
july covello isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan iibsaday guri, 6 sano ka hor, oo waxaan qoray 1 sanad ka hor, hadda waxaan ogaaday in milkiilaha hore uu bilaabay qeyb hoosaadka ,,, ma xasuusto inaad sahamiso bilowgii,, maxaan sameeyaa si aan u sii wado,, maadaama aan xiiseynayo inaan qeybinta u qeybiyo ,,, mahadsanid
Maarso, 2008 at
Waxaan u maleynayaa in qorshaynta ujeeddadiisu tahay mid wanaagsan, laakiin shaqooyinka halista ah qalabku dhab ahaan maaha in aanay lahayn awoodaha, laakiin taasi waxay leedahay qalab iyo xog gaar ah.
Si loo siiyo tusaale, GoogleEarth ayaa orthorectified image satellite ah ama il xataa orthophoto of sawir anteenada la pixel hal mitir iyo xataa hoose, soo jeedinaya baadi qaraabo radial ee ku saabsan 1.50 mitir, laakiin khaladaad waadaxa ah ee georeferencing socod by 30 mitir. Tani waa tusaale
frikingeniero isagu wuxuu leeyahay:
Dalka Spain, dhererku wuxuu isticmaalaa Sigpac (http://sigpac.mapa.es/fega/visor/) in aan qiyaaso in si sharci ah loo isticmaali karo marka lahaanshaha wasaaradda.
Marka la eego saxnimadeeda waa in ay ahaataa mid weyn, oo laga bilaabo bilowgii ujeeddooyinkan.
EMR isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2007 at
Waxa halkan uga muuqda sidii hal-abuurnimo farsamo kama badna waxa aynu ugu yeedhnay Argentina “A Patch” ama xalka aan sugnayn ee xaaladdan oo kale waa maqnaashaha sahamada ee gobolka Buenos Aires. Waxaan aaminsanahay in xalka la soo bandhigay inuusan ahayn mid halis ah oo aan loo horumarin iyada oo la raacayo qoraalka la soo qoray ee sharciga cadastral wuxuu leeyahay: «... beddelaadaha dhul-dhaafka oo damaanad qaada heerarka saxda, isku halaynta iyo isku xirnaanta la barbar dhigi karo falalka cabirka»
Xaqiiqdii, Goggle Earth waxay leedahay qaabeyn muhiimad siinaya soo bandhigida nooc ka mid ah macluumaadka laga qaaday taariikhda aan la aqoon, xaaladaha aan la aqoon iyo cidda kale ee garaneysa. Maaha shey loo qaadan karo farsamo ahaan. Xaashi leh sharciga oo dhan oo damaanad qaadaya uruurinta iyo xurmaynta xuquuqda muwaadinku waxay u baahan tahay adeegsiga farsamooyin tayo leh iyo heerar u dhigma aruurinta macluumaadka noocan ah ee ma aha “chantada” (Argentine: indho indhayn la'aan) .
Goggle Earth waa aalad aad u wanaagsan oo aad u wanaagsan haddii loo adeegsado macnaha guud ee la abuuray. Kordhinta awoodeeda dhulka oo aan u dhigmin dad aan aqoon u lahayn ayaa si dhakhso leh noo horseedaya kiisas aan macquul ahayn sida midda aan kor ku soo sheegnay ee ah “in la ogaado sida loo isticmaalo Arc-View muhiim maahan in la ogaado sawir gacmeedka”.
José Ramón Sánchez isagu wuxuu leeyahay:
July, 2007 at
arimaha lagu soo jeediyey in maqaalka waa suuragal ah keliya haddii macluumaadka waxaa laga heli karaa,-xalinta sare, sida ay u aqoonsanaya Naftiinna Google Earth, ujeedooyin khariidaynta waa heer sare variable. Waxaa intaa dheer, macluumaadka, in kasta oo waxtar leh, ma aha in waqtiga dhabta ah, taas oo ka dhigaysa beddelka suurto galka ah ee hantida guurtada laga yaabaa in aan la ogaan, iyo inculisve beddelo isticmaalka dhulka, taas oo catastra shaqada diiwaangelinta Waa arrin aad u fiican. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan, fikradaha lagu soo bandhigay maqaalkiisa ayaa aad u faa'iido badan. Salaamaha Jose Ramon Sanchez, dhawaaqa, Venezuela, Edo. Tchira